वर्षौ एके–४७ मा रमाएका तालिबानको हातमा यतिबेला एमफोर १६–लाइट मसिनगन! - Dainik Online Dainik Online
वर्षौ एके–४७ मा रमाएका तालिबानको हातमा यतिबेला एमफोर १६–लाइट मसिनगन!
प्रकाशित मिति : ८ भाद्र २०७८, मंगलबार ३ : ३२
तालिबालने अफगानिस्तान कब्जा गर्ने देखेपछि अमेरिकी सेनाहरु रातारात स्वदेश फर्किने प्रक्रिया सुरुवात भएको थियो। सो क्रममा उनीहरुले आफ्ना हतियार आफूसँगै फर्काउन सकेनन्। यतिबेला तिनै हतियारहरु तालिबानको हातमा देखिन थालेको छ।
तालिबालने पुराना हतियारहरु जस्तै एके ४७ वर्षौयता चलाउँदै आएका थिए। यतिबेला भने तालिबानको हातमा एमफोर १६, एम १६ एफोर, लाइट मसिनगनजस्ता अमेरिकी हतियार देख्न सकिन्छ। अमेरिकी सेनाले हजारौं हतियार छाड्दा ब्ल्याक हक हेलिकप्टर, हतियार सम्पन्न गाडीहरु पनि तालिबानको हातमा गएको देखिएको छ।
यतिबेला तालिबानको हातमा पुग्दो अमेरिकी हतियार गएको बताइन्छ। सन् २००५ देखि यस वर्षसम्म अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई १८ अर्ब अमेरिकी डलरको हतियार सहयोग गरेको बताइन्छ। तालिबानले केही समयको अन्तरालमै देश कब्जा गरेपछि सरकारी सेनाबाट पनि उनीहरुले अनगिन्ती अमेरिकी हतियार प्राप्त गरेका छन्।
अमेरिकी सेनाले छाडेको साथै सरकारी सेनाबाट अमेरिकी हतियार प्राप्त गरेपछि तालिबान झनै शक्तिशाली भएको बताइन्छ।